အောင်လံမြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ဖြူ (ဆေးကုလားမ)များ အထွက်ကောင်းကာ ဈေးကောင်းရေ?? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ဖြူ (ဆေးကုလားမ)များ အထွက်ကောင်းကာ ဈေးကောင်းရေ??
အောင်လံ၊ အောက်တိုဘာ ၇
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့နယ် စမ်းကလေးကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးထားသောလျှော်ဖြူ (ဆေးကုလားမ)များအထွက်ကောင်းကာ ဈေးကောင်းရနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရှိရသည်။ ”လျှော်ဖြူစတင်စိုက်ပျိုးတာ လေးနှစ်ရှိပါပြီ။ အခုစတင်အစေး ခြစ်ယူထွက်ရှိတာတစ်နေ့ကို ၁၂ ဗန်း(နှစ်ပိဿာ)ထွက်ပါတယ်။ လျှော်ဖြူနှစ်ဧကစိုက်ပျိုးထားတာ အပင်ခြောက်ရာရှိပါတယ်”ဟု စမ်းကလေးကျေးရွာတောင်သူတစ် ဦးကပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်တွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားသောလျှော်ဖြူ (ဆေးကုလားမ)အပင်များမှာ နှစ်ရှည်ပင်မျိုးဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က စတင်ကာ အောင်လံမြို့နယ် စမ်းကလေးကျေးရွာတောင်သူငါးဦးနှင့် အောင်လံမြို့ ရွာထောင်ရပ်ကွက်မှ တောင်သူတစ်ဦးတို့က ၁ဝ ဧကစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အခုအခါ လျှော်ဖြူစေးများ စတင်ထုတ်ယူထွက်ရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ လျှော်ဖြူ(ဆေးကုလားမ) မျိုးစေ့မှာ ထိုင်ဝမ်မျိုးစေ့ ဖြစ်ကာ အစေ့ခြောက်ရာပါမျိုးစေ့ တစ်အိတ်ကို ကျပ်တစ်သိန်းခွဲဖြင့် ဝယ်ယူပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးကြရခြင်း ဖြစ်ပြီး အပင်မှထွက်ရှိသောလျှော် ဖြူစေးကို ဖြူဖွေးအဆင့်တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ်ငါးသောင်း၊ အရောင်ပါ အဆင့်တစ်ပိဿာလျှင်ကျပ်လေး သောင်းနှင့် အညံ့တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲနှုန်းဖြင့် မန္တလေး ဈေးကွက်ဝယ်လက်များက ဝယ်ယူ၍ တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ နေကာ အစားအသောက်နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ရာ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း စမ်းက လေးကျေးရွာနှင့် ရေပေါ်ကျေးရွာများရှိ တောင်သူများမှတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲများ မန္တလေးနှင်??
တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ပင်လယ်ပြင်၌ ပြေးဆွဲနေသော ရေယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းစေရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
အကျဉ်းထောင် ဆူပူမှုဖြစ်ပွားခြင်းမှာ လက်နီကြီးကြောင့်ဟု တစည ပါတီပြောခွင့်ရသူပြောကြား
မွန်ပြည်နယ်၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေ စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်(Citizen’s Budget) စာေ
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ယခုနှစ်တွင် အပင်ပေါင်း ကိုးသိန်းကျော် စိုက်ပျိုးမည်